Katsi Mubhedha Paunenge uchigadzira Catzz katsi mubhedha, kurudziro yakatorwa kubva kune zvaidiwa katsi uye varidzi zvakafanana, uye inoda kubatanidza basa, kureruka uye runako. Ndichiri kucherechedza katsi, yavo yakasarudzika geometrical maficha akafuridzira yakachena uye inozivikanwa fomu. Humwe hunhu hwehunhu maitiro (semuenzaniso kufamba kwenzeve) kwakazoverengerwa muchiitiko chemushandisi wekati. Zvakare, kutakura varidzi mupfungwa, chinangwa chaive chekugadzira fanicha yavanogona kugadzirisa uye vachidada kuratidza. Uyezve, zvaive zvakakosha kuverengera nyore kugadzirisa. Zvese izvo zvakapfava, dhizaini dhizaini uye modular dhizaini inogonesa.
Kirabhu Yekuzorora Dzokera kune yakapfava yehupenyu, zuva kuburikidza nepahwindo mwenje uye mumvuri crisscrosses. Kuti uratidze zvirinani kunhuhwira kwepamoyo munzvimbo yese, shandisa zvizere dhizaini dhizaini, yakapusa uye yakashongedzwa, yekunyaradza kwevanhu, kushushikana nehunyanzvi nzvimbo yemhepo. Oriental charm toni, ine yakasarudzika nzvimbo mamiriro. Uku kumwe kutaura kwekunze, zvakasikwa, zvakachena, zvinosiyana.
Pakaoma Tii Kurongedza
Pakaoma Tii Kurongedza Iyo dhizaini ndeye cylindrical mudziyo une yakajeka mivara. Kugadziriswa uye kuvhenekesa kushandiswa kwemavara uye maumbirwo kunogadzira dhizaini inoenderana inoratidza SARISTI's herbal infusions. Chii chinosiyanisa dhizaini yedu kugona kwedu kupa kwazvino kutsausa kuti tiome tii kurongedza. Mhuka dzinoshandiswa mupakeji dzinomiririra manzwiro uye mamiriro ezvinhu anowanzoonekwa nevanhu. Semuenzaniso, shiri dzeFlamingo dzinomiririra rudo, iyo Panda bheya inomiririra zororo.
Mafuta Omuorivhi Kurongedza
Mugovera 1 Ndira 2022
Mafuta Omuorivhi Kurongedza Sezvo maGiriki ekare aipenda nekugadzira yega yega maorivhi amphora (mudziyo) zvakasiyana, vakasarudza kuzviita nhasi! Ivo vakamutsiridza uye ndokushandisa hunyanzvi hwekare uye tsika, mune ino yazvino kugadzirwa uko kwese uye rimwe nerimwe remabhodhoro e2000 akaburitswa ane maitiro akasiyana. Bhodhoro rega rega rakagadzirwa zvakasiyana. Iyo imwe-ye-ye-mhando dhizaini dhizaini, yakafemerwa kubva kune ekare echiGreek mapatani ane echizvino kubata iyo inopemberera vintage olive olive nhaka. Haisi denderedzwa rinotyisa; iyo yakatwasuka iri kusimukira yekugadzira mutsara. Yese tambo yekugadzira inogadzira 2000 akasiyana magadzirirwo.
Chishanu 31 Zvita 2021
Kushambadza 1869 Principe Real imubhedha neKudya kwemangwanani kuri munzvimbo inotyisa muLisbon - Principe Real. Madonna akangotenga imba munharaunda ino. Iyi B & B iri mune 1869 yakare imba yamambo, ichichengeta yekare chishongo yakavhenganiswa neyemukati zvemukati, ichichipa yakasarudzika kutaridzika uye kunzwa. Uku kushambadzira kwaidikanwa kuti kuve nekuisa izvi zviyero muiyo logo uye maratidziro ekushandisa kuratidza huzivi hweiyi yakasarudzika pekugara. Izvo zvinoguma ne logo inosanganisa font yakasarudzika, ichiyeuchidza manhamba ekare emusuwo, neazvino typography uye tsananguro yeiyo stylized mubhedha icon muL yeReal.
Alignment to Air 3D Animation Chipiri 28 Chikumi
Marais Chipo Kurongedza Makeke Muvhuro 27 Chikumi
Cliff House Kupera Kwevhiki Svondo 26 Chikumi
Mhete Katsi Mubhedha Kirabhu Yekuzorora Pakaoma Tii Kurongedza Mafuta Omuorivhi Kurongedza Kushambadza